Sintomy ary apetraho ny endrika vaovaon'ny ES File Explorer Material Design | Androidsis
Azo antoka fa ianareo rehetra izay manaraka tsy tapaka Androidsis Efa naheno ahy nilaza mihoatra ny indray mandeha ianao fa tsy isalasalana, ho ahy manokana ny mpikaroka rakitra tsara indrindra ho an'ny Android dia ny ES File Explorer. Amin'ity indray mitoraka ity dia tena faly aho mizara aminareo rehetra ny kinova vaovao an'ny ES Material Design File Explorer.
Ity iray ity 4.0 version ny fangatahana, mbola ao amin'ny fanjakana beta, dia manolotra fiovana lehibe eo amin'ny sehatry ny kisary, izay nanarahana ny torolàlana napetrak'i Google ho an'ny fampiharana Android miaraka amina endrika Material Design Enga anie ny marina hahatsapa tena tsara amin'ity mpikaroka rakitra manaitra ho an'ny Android ity izay azontsika alaina maimaimpoana amin'ny Google Play Store, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android.
1 Inona no atolotry ny ES File Explorer antsika?
2 Manao ahoana ity kinova ES Explorer Design File Explorer ity?
3 Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana ny kinova ES Material Design File Explorer?
Inona no atolotry ny ES File Explorer antsika?
Raha, araka ny nolazaiko anao, ES File Explorer Efa ho ahy ny fampiharana tsara indrindra hitantanana rakitra amin'ny terminal Android, miaraka amin'ity fanavaozana vaovao ny Material Design ity dia voamarina ny lalàna, manome ny fampiharana miaraka amina endrika mahavariana nefa mahomby kokoa, raha azo atao, izay toa mazava sy mifanaraka daholo ny zava-drehetra. miaraka amin'ireo rindranasa Google vaovao.
Toy ny mahazatra, miaraka amin'ny ES File Explorer dia hanohy hanana isika ny safidy tsara indrindra hitantanana ny fisie anay amin'ny Android, na izy ireo dia mijanona ao anaty fahatsiarovana anatiny na ivelany na amin'ny alàlan'ny kapila mafy na pendrive mifandray amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB OTG na koa mitantana rakitra amin'ny tambajotra.
Toy izany koa, hanohy hanana ny fampiasa mahazatra an'ny Root File Explorer, fampidirana rakitra sy decompressor tafiditra na ny mety ny mamorona varavarankely marobe hiditra amin'ny lalana samihafa amin'ny tsindry iray monja, ahazoana aina BIRAO, BIRAO hikirakira rakitra marobe amin'ny fotoana iray sy ny mety hiasa miaraka amin'ireo rakitra toa ny ataontsika avy amin'ny Windows amin'ny alàlan'ny fisafidianana sy fisintomana hamindra ireo rakitra mankany amin'ny lahatahiry hafa.
Manao ahoana ity kinova ES Explorer Design File Explorer ity?
Mba hahafahanao mahita ny fahatsapan'ity fanavaozana ny Material Design ity, izay ho ahy no mpikaroka rakitra tsara indrindra ho an'ny Android, tsy misy tsara noho ny mahita ny horonantsary raketiko manokana, vita amin'ny LG G2, izay Atoroko anao ny fanavaozana rehetra izay efa nodinihin'ny fampiharana Miaraka amin'ity mpamatsy Material Design vaovao ity izay, raha lazaina ny marina, dia mety aminao indrindra.
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana ny kinova ES Material Design File Explorer?
Amin'izao fotoana izao, ity kinova vaovao an'ny ES Material Design File Explorer Tsy azo tanterahina izany amin'ny alàlan'ny fampidinana mivantana ny apk ary ny fametrahana azy amin'ny tanana. Apk izay ho azonao atao misintona mivantana avy amin'ity rohy ity ary izay hapetrantsika tanana amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ilay fampandrenesana fampidinana mahomby. Mazava ho azy, alohan'ny hahatsiarovanao ny fahazoan-dàlana alefa hahafahana mametraka ny rindranasa ivelan'ny Play Store, izay fantatra amin'ny hoe fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra. Ity safidy ity dia hita ao anatiny Fikirana / filaminana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » [APK] Sintomy sy apetraka ny kinova ES Material Design File Explorer
ZTE Blade V6 natolotra tamin'ny fomba ofisialy
Lalao video 7 tsy azo ialana amin'ny fiainana ho an'ny fitaovanao Android